IRosari kwiNtombikazi yaseGuadalupe ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuvela kweNtombi Enyulu yaseGuadalupe kuphawule kakhulu ubomi bamaKatolika, kuba waziwa njengeKumkanikazi emamela yonke into. Ke ngoko, ukuba ufuna ukwazi lonke olona lwazi lubalulekileyo malunga nalo, kunye ne IRosari kwiNtombi Enyulu ukusuka eGuadalupeSiyakumema ukuba usifunde.
1 Ngubani iNtombi Enyulu kunye nokubaluleka kweRosari kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe?
2 Yintoni intsingiselo yomfanekiso weNtombi Enyulu yaseGuadalupe?
2.1 Yintoni efuziselwa ngamehlo?
2.2 Zifanekisela ntoni izandla zakho?
2.3 Yintoni efanekiselwa ngumnsalo omnyama?
2.4 Imitha yelanga yeNtombi Enyulu yaseGuadalupe ifanekisela ntoni?
2.5 Ingubo yakhe ifanekisela ntoni?
2.6 Ifanekisela ntoni ingubo?
2.7 Ifanekisela ntoni inyanga?
2.8 Zifanekisela ntoni iinwele zakho ezikhululekileyo?
3 Rosary kwi-Virgin yaseGuadalupe
3.1 Imfihlelo yokuqala: Intombikazi yaseGuadalupe izisa umyalezo kubantu bayo
3.2 Imfihlakalo yesibini: UJuan Diego wabelana ngokuthobeka kwakhe neNtombi Enyulu
3.3 Imfihlakalo Yesithathu: UMaría de Guadalupe ukhethe uJuan Diego ngenxa yokulula kwakhe
3.4 Imfihlakalo yesine: Intombikazi enguMariya waseGuadalupe iphilisa uJuan njengophawu lokuba ufuna impilo nolonwabo ebantwini
3.5 Imfihlakalo yesihlanu: Intombi Enyulu yaseGuadalupe isishiya nomfanekiso wayo ukusikhumbuza ngesisa sayo, uthando kunye nokukhuselwa kwayo
3.5.1 Umthandazo uphele
Ngubani iNtombi Enyulu kunye nokubaluleka kweRosari kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe?
Ukuba wakha wazibuza ukuba Ngubani iNtombi Enyulu yaseGuadalupe? Ume kwindawo elungileyo, kuba siza kukubonisa oku nokunye okuninzi. Ibalisa ibali elimangalisayo lokuba iNtombi Enyulu yaseGuadalupe kufuneka ibonakale kwabo basweleyo, njengalowo mzuzu xa wabonakala kumntu womthonyama owayegula ngumalume wakhe, ke ngoko efuna uncedo. Emva kokudibana neNtombikazi endleleni, yamxelela ukuba umalume wakhe sele ephilisiwe kwaye uphilile.
Ukongeza, ilivo lisithi uJuan Diego wadibana neNtombikazi enguMariya kwaye wayicela ukuba icele ukwenza isibingelelo isebenzisa iiroses zodwa, njengombulelo kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe ngokunceda abo basweleyo nokuphulaphula imithandazo yakhe.
Yintoni intsingiselo yomfanekiso weNtombi Enyulu yaseGuadalupe?
Umfuziselo womfanekiso weNtombi Enyulu yaseGuadalupe ithathwa njengengcwele yaseMexico, ngenxa yokuvela kwayo ngokungalindelekanga kubemi baseMexico. Ukusukela oko baqala ukubonakala, abantu baseMexico baqala ukuthwebula umfanekiso wabo kwinto nganye, ukongeza, kumanqaku amaninzi okanye izinto zeememorandam.
Yintoni efuziselwa ngamehlo?
Kuyatshiwo ukuba inkangeleko yakhe ibonakalisa ububele kunye nothando oluninzi. Kwimifanekiso apho sinokumbona khona, uyabona ukuba ujonge ezantsi, kuba oku kufanekisela intlonipho, ukongeza, kukho amabali abonisa ukuba amanani abantu alishumi elinambini (12) anokubonwa ekubonakalisweni kwamehlo akhe.
Zifanekisela ntoni izandla zakho?
Izandla zakhe zibonisa ukuba uyathandaza, kunye nokubonakalisa umanyano phakathi kweentlanga ezahlukeneyo.
Yintoni efanekiselwa ngumnsalo omnyama?
Iingcali ezininzi zithi isaphetha esimnyama seNtombi Enyulu yaseGuadalupe simele ukuba ngumama, kunye nokuzalwa kwamaxesha amatsha kunye nomanyano. EMexico, abafazi babedla ngokunxiba ibhanti elimnyama ukuze basikhulule ngokupheleleyo isisu sabo.
Imitha yelanga yeNtombi Enyulu yaseGuadalupe ifanekisela ntoni?
Kujikeleze i-Virgin yaseGuadalupe ungabona imitha yelanga, ezi zimele i-aura, kodwa kwakhona, ikwamele ilanga, ukhanyisa ngamaxesha obumnyama.
Ingubo yakhe ifanekisela ntoni?
Kwingubo yakhe sinokubona amalungiselelo eentyatyambo ahlukeneyo, ngokuchanekileyo, kukho amalungiselelo eentyatyambo alithoba. Ezi zimele iidolophu ezintsha zabahambi. Ukongeza, unokubona ngokucacileyo intyatyambo yeNahui Ollín, ethathelwa ingqalelo ubukho beNkosi yethu uThixo.
Ifanekisela ntoni ingubo?
Intombi Enyulu yaseGuadalupe inxibe ingubo enomtsalane, emele isibhakabhaka. Kuyo unokubona iinkwenkwezi ezingama-46, ekuthiwa zenza amaqela eenkwenkwezi ngexesha lokuvela kwazo. Kwelinye icala, oluhlaza kwengubo yakhe ibonisa ukuba wayeyinkosikazi. Unokufunda nolunye uthotho lwezivakalisi, umzekelo Umthandazo kwiNtombi Enyulu yoXolo.
Ifanekisela ntoni inyanga?
Apha ngezantsi kwayo ungabona uhlobo lwenyanga, emele ukuba liziko le la luna, eMexico «Náhuatl».
Zifanekisela ntoni iinwele zakho ezikhululekileyo?
Iinwele zakhe ezomileyo zimela ubuntombi, kanye njengokuba zazifanekiselwa ziAztec.
Ukuze ukwazi ukuqala irosari KwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe, kuya kufuneka uqale ngale ndlela ilandelayo:
sikhulule iNkosi yethu.
«Ndiyakholelwa kuThixo uYise, umdali wezulu nomhlaba.
Ndiyakholwa kuYesu Krestu, okuphela konyana wakhe,
owakhawulwa ngomsebenzi nobabalo loMoya oyiNgcwele.
wazalwa eSanta María;
wabandezeleka phantsi koPontiyo Pilato,
Wabethelelwa emnqamlezweni, wafa wangcwatywa;
wehla waya esihogweni,
Wenyuka waya ezulwini, waye ehleli ngasekunene kukaThixo.
Ukusuka apho kufuneka eze kugweba abaphilayo nabafileyo.
Ndiyakholelwa kuMoya oyiNgcwele;
uvuko lomzimba nobomi obungunaphakade. Amen ".
Yomelela uBawo wethu uBawo wethu njengoko sifundisiwe, Bathathu ooMariya baqala ngemfihlelo yokuqala.
Imfihlelo yokuqala: Intombi Enyulu yaseGuadalupe izisa umyalezo kubantu bayo
Bantwana bam, ndiyaniqonda, ndiyintombi enyulu uMariya, umama kaThixo, uMdali wethu, iNkosi yezulu nomhlaba. Ndise etempileni, apho ndingabonisa lonke uthando lwam njengomama, imfesane yam kunye noncedo lwam.
Imfihlelo yesibini: UJuan Diego wabelana neNtombi yakhe ngokuthobeka kwakhe
Ndingumtya ocenga ukuba uyihloniphe, ndiyindoda ezakuhambisa umyalezo wakho kwabo bangakwaziyo.
Imfihlakalo Yesithathu: UMaría de Guadalupe ukhethe uJuan Diego ngenxa yokulula kwakhe
Nyana wam omncinci, kuya kufuneka uqonde ukuba ndinabakhonzi abaninzi kunye nabathunywa, banokuthumela umyalezo wam kwaye banike uncedo lwam ngokungathi kukuthanda kwam, kodwa nguwe kuphela onokundinceda ndenze ukuthanda kwam.
Imfihlakalo yesine: Intombikazi enguMariya waseGuadalupe iphilisa uJuan njengophawu lokuba ufuna impilo nolonwabo ebantwini
Nyana, makungabikho nto ikoyikisayo, mayingakhathazeki intliziyo yakho encinci, ungoyiki nasiphi na isifo endiza kuba kukuphilisa.
Imfihlakalo yesihlanu: Intombi Enyulu yaseGuadalupe isishiya nomfanekiso wayo ukusikhumbuza ngesisa sayo, uthando kunye nokukhuselwa kwayo
UJuan Diego, oyena nyana mncinci, uza neentyatyambo kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe njengendlela yokubulela.
«Mama ndiboleke amehlo akho, ujonge nabo.
Ndiboleke imilebe yakho, uthandaze kunye nabo.
Ulwimi lwakho, ukwamkela umthendeleko.
Iingalo zakho, ukuze ukwazi ukusebenza.
Ingubo yakho yokundigubungela ububi.
Ndiboleke unyana wakho, ukuze ndikwazi ukuthanda. Ukuba ungandinika umntwana onguYesu, yintoni enye endinokuyinqwenela. Amen ".